Momba anay - Jinan CBS Industry Company Limited
Masinina fitaratra mitaingina
Masinina IGU Spacer mafana
Masinina manapaka fitaratra
Masinina fanodinana fitaratra hafa
Tsipika famokarana singa fitaratra
Ny orinasam-pifandraisana CBS INDIMBY voafetra
Ny fitaovana fanodinana vera CBS dia misy ny tsipika famokarana vera, ny milina fanasan-damba mitsivalana sy mitsivalana, ny milina fanodinana vera ary ny latabatra fanapahana fitaratra sns.
Mba hihaonana amin'ny takian'ny mpanamboatra fitaratra insulated glass (IGU), ny CBS dia mampiasa vola mitohy amin'ny fikarohana sy famolavolana fitaovana vaovao. Ny fitaovana fitaratra fitaratra dia ampiasaina betsaka amin'ny spacer metaly mahazatra (spacer aluminium, spacer tsy misy vy, sns.) Ary spacer mafana tsy misy vy (toy ny spacer super, Dual Seal, sns.) Famokarana vera.
Ho fanolorana tolo-kevitra momba ny famokarana, manana vahaolana tsotra izahay izay mampiasa teknolojia famehezana butil meloka mafana, fikorianam-bidy tena tsotra, fampiasam-bola ambany, izay fomba tena azo ampiharina ihany koa ho an'ny faritry ny toetrandro manokana. Ho an'ny tolo-kevitra momba ny famokarana vokatra lehibe, manana tontonana famokarana fitaratra mandeha ho azy izahay, manery ny tsipika famokarana vera ho an'ny haben'ny habe, max. haben'ny vera fitaratra mitazona hatramin'ny 2700x3500mm. Fitaovana fanerena fanaraha-maso maotera servo vaovao nohavaozina dia mahatonga ny IGU ho marimarina kokoa ary ho tsotra sy mora kokoa ny fandidiana.
Miorina amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny famolavolana tsipika famokarana fitaratra, dia nanitatra ny vokatra izahay ho an'ny fanasan-damba fitaratra, milina fanodinana vera ary fitaovana fanapahana fitaratra sns. Ny andian-tsarimihetsika GWG misy horonam-pandehanana haingam-pandeha haingam-pandeha dia manolotra vahaolana tsara indrindra ho an'ny fanodinana vera, izay misy hafainganana haingam-pandeha sy vokatra bebe kokoa.